I Lephephe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 696. Ny laharam-pokontaniny dia 25. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lepokole dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 955. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Leporung dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 575. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lerala dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 6 871. Ny laharam-pokontaniny dia 20. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lesenepole/ Matolwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 048. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia -22.585543 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.567368.
I Leshibitse dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 545. Ny laharam-pokontaniny dia 14. Ny laharam-pehintaniny dia -23.832486 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.463735.
I Lesoma dia tanàna iray ao aminny distrikani Chobe any Botsoana. Ny isam-poniny dia 613. Ny laharam-pokontaniny dia 8. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Letlhakane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 22 911. Ny laharam-pokontaniny dia 238. Ny laharam-pehintaniny dia -21.416667 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.583333.
I Letlhakeng dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 7 229. Ny laharam-pokontaniny dia 75. Ny laharam-pehintaniny dia -23.451457 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.473724.
I Letsholathebe dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 613. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.68007 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.438465.
I Logagane dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 428. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lokgwabe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 417. Ny laharam-pokontaniny dia 8. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lorolwana dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 568. Ny laharam-pokontaniny dia 13. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lorwana dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 177. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Losilakgokong dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 208. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lotlhakane dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 4 828. Ny laharam-pokontaniny dia 8. Ny laharam-pehintaniny dia -25.086125 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.4586.
I Lotlhakane West dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 637. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -25.086125 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.4586.
I Maape dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 319. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mababe dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 230. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mabalane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 738. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia -22.642003 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.71405.
I Mabeleapudi dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 247. Ny laharam-pokontaniny dia 22. Ny laharam-pehintaniny dia -22.213555 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.833118.
I Mabesekwa dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 528. Ny laharam-pokontaniny dia 34. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Maboane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 085. Ny laharam-pokontaniny dia 28. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mabolwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 701. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia -21.821173 ary ny laharan-jarahasiny dia 28.820043.
I Mabudzane dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 563. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.906771 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.633895.
I Mabule dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 260. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mabutsane dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 386. Ny laharam-pokontaniny dia 23. Ny laharam-pehintaniny dia -24.38646 ary ny laharan-jarahasiny dia 23.574861.
I Machaneng dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 537. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -23.18621 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.488558.
I Madingwana dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 310. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mafongo / Hobona dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 151. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Magoriapitse dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 846. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia -25.443321 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.289582.
I Magotlhwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 433. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -24.999185 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.585592.
I Mahalapye dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 43 289. Ny laharam-pokontaniny dia 97. Ny laharam-pehintaniny dia -23.104068 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.814214.
I Mahetlwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 610. Ny laharam-pokontaniny dia 15. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mahotshwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 861. Ny laharam-pokontaniny dia 25. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Maitengwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 5 890. Ny laharam-pokontaniny dia 16. Ny laharam-pehintaniny dia -20.128894 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.209968.
I Majwanaadipitse dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 638. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Majwaneng dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 903. Ny laharam-pokontaniny dia 9. Ny laharam-pehintaniny dia -22.789213 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.321391.
I Makalamabedi dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 010. Ny laharam-pokontaniny dia 134. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Makaleng dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 256. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.9 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.283333.
I Make dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 398. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Makobo dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 268. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -21.065955 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.174191.
I Makokwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 137. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Makopong dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 697. Ny laharam-pokontaniny dia 16. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Makunda dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 674. Ny laharam-pokontaniny dia 21. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Makuta dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 014. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Makwate dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 611. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Malaka dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 044. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia -22.6155 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.329398.
I Malatswai dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 482. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Maleshe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 462. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.